ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအစမှာပါတဲ့ မင်္ဂလာပွဲက လီလီနဲ့ကွန်းရန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပါ ... ပိုင်ရှောင်ရွှီနဲ့မဟုတ်ပါဘူး ... ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့လဲ မသိပေမယ့် အဲ့မြုပ်ကွက် ကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ...
ပိုင်ရှောင်ရွှီကရော ဟန်ရီချန်းကို ပဲဆက်ကြိုက်နေမှာလား ?
လီလီနဲ့ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြတာလဲ ?
ပိုင်ရှောင်ရွှီ ကဘာလို့အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာလဲ ?
အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို 15 Years of Waiting for Migratory Birds ဆိုတဲ့ Chinese Drama လေးမှာ ဆက်လက် အဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Translator - Hsu Sandar Aung
Episode 16 ( Openload Link )
Episode 17 ( Openload Link )
Episode 18 ( Openload Link )
Episode 19 ( Openload Link )
Episode 20 ( Openload Link )
Episode 21 ( Openload Link )
Episode 22 ( Openload Link )
China Friendship Life Mature Romance
Labels: China Friendship Life Mature Romance
Luu Luu May 13, 2017 at 11:45 PM
Yu Nandar Aung May 16, 2017 at 10:09 PM
Thank you so much/ we are asiantv fan.
Yu Nandar Aung May 25, 2017 at 12:00 AM
min naing June 2, 2017 at 8:04 AM
Blindspot July 24, 2017 at 2:03 AM
File not found ဖြစ်နေပါတယ် op link
saw yee lin July 24, 2017 at 10:00 AM
saw yee lin July 24, 2017 at 10:07 AM
Yu Nandar Aung August 7, 2017 at 12:58 AM
Please update ... (HOPING)
please upload the remaining episode.
saw yee lin August 23, 2017 at 3:15 AM
Hein Sett September 23, 2017 at 8:01 AM
ep24
file not fount ဖြစ်နေပါတယ်